Prime Minista Canada kwupụtara nkwupụta banyere mberede ụgbọ elu Iran
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Prime Minista Canada kwupụtara nkwupụta banyere mberede ụgbọ elu Iran
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
CanadaMịnịsta ala, Justin Trudeau, taa wepụtara nkwupụta a banyere ọnwụ ụgbọelu dara na Iran:
“N’ụtụtụ taa, m sonyeere ndị Canada gafee mba ahụ bụ ndị juru anya ma nwee mwute ịhụ akụkọ na ihe mberede ụgbọelu na mpụga Tehran, Iran, tara isi mmadụ 176, gụnyere ndị Canada 63
“N’ọnọdụ Gọọmentị nke Canada, mụ na Sophie na-agwa ndị nwụrụ anwụ nke ndị ezinụlọ, ndị enyi, na ndị ha hụrụ n’anya ọdachi a kasiri obi. Gọọmentị anyị ga-anọgide na-arụkọ ọrụ ọnụ yana ndị mmekọ ụwa ya iji hụ na a nyochachara ihe mberede a nke ọma, ma zaa ajụjụ ndị Canada. Taa, m na-emesi ndị Canada niile obi ike na nchekwa na nchekwa ha bụ ihe kacha mkpa anyị. Anyị na ndị mba ọzọ na-eru uju maka ọnwụ nke ụmụ amaala.
“Minista Champagne anọwo na gọọmentị nke Ukraine na-akparịta ụka, ma na-agwa ndị isi dị mkpa na ndị mmekọ mba ụwa okwu. Mịnịsta Garneau na ndị ọrụ si Transport Canada na-arụkọ ọrụ, ma na-agakwuru ndị otu ibe ya.
"Ndị enyi na ndị ikwu nke ụmụ amaala Canada kwenyere na ha nọ n'ụgbọ mmiri ahụ nwere ike ịkpọtụrụ Global Affairs Canada nke 24/7 Emergency Watch and Response Center site na ịkpọ 613-996-8885 ma ọ bụ 1-800-387-3124. Mụ amaala Canada nọ na Iran chọrọ enyemaka ndị nnọchi anya ga-akpọtụrụ ndị nnọchi anya Canada na Ankara ma ọ bụ kpọọ Global Affairs Canada's Emergency Watch and Response Center.